China Card Circuit China Fanamboarana sy orinasa | KAISHENG PCB
PCBFuture dia manolotra ny mpanjifanay amin'ny serivisy fivoriambe Turnkey PCB azo antoka izay mahomby amin'ny vokatra tsara amin'ny vidin'ny fifaninanana. Ny serivisy fivoriambe Turnkey PCB ao anatin'izany ny PCB, ny singa, ny solosaina PCB ary ny fitsapana. Amin'ny maha-orinasa mpanangona birao fanaovana pirinty voatonta, PCBFuture dia mifantoka amin'ny tampon-trano sy amin'ny alàlan'ny fanangonana lavaka, ny rafitra sy ny masininay rehetra dia namboarina hihaona amin'ny endrika, ny famaritana ary ny habetsaky ny serivisy fivorian'ny elektronika anao.
Vy Coating: ENIG
Sosona: 6 Layer PCB
Fitaovana fototra: Normal TG FR-4
Fitaovana vy: ENIG Fomba famokarana: SMT + Sosona: PCB sosona 6
Fitaovana fototra: Normal TG FR-4 Fanamarinana: ISO, RoHS MOQ: Tsy misy MOQ
Karazana solder: tsy misy firaka (mifanaraka amin'ny RoHS) Serivisy tokana: PCB + Components + Assembly Fitsapana: Fitsapana 100% AOI / X-ray / Visual
Fanohanana Tehnolojia: DFM Maimaimpoana Karazana fivoriambe: SMT, THD, DIP, PCBA mifangaro teknolojia Fenitra: IPC-a-610d
Teny lakile: vidin'ny famokarana PCB, fizotran'ny fivoriambe PCB, Mponina PCB, mpanamboatra solosaina PCB, fivoriambe / vidim-panandramana PCB, vidin'ny singa, Orinasa fivoriamben'ny birao vita pirinty.
Fa maninona no misafidy?
Serivisy fivoriambe PCB prototype haingana
PCBFuture dia afaka manampy anao hampiditra ny vokatrao amin'ny tsena haingana kokoa noho ny mpifaninana aminao, ary koa afaka mampihena ny vidiny. Miasa haingana kokoa noho izao rehetra izao izao tontolo izao. Amin'ny ankapobeny, ny orinasa miditra an-tsena aloha no mahazo ny tombony be indrindra. Ao amin'ny PCBFuture, te-hiaraka aminao izahay ary manolotra amin'ny alàlan'ny fanamboarana prototype PCB haingana sy serivisy fivorian'ny birao elektronika.
Nanendry injeniera manokana tompon'andraikitra amin'ny tetik'asa tsirairay izahay ary afaka manolotra amin'ny alàlan'ny safidin'ny fivoriambe mora azo amin'ny mpanjifanay. Ny ekipanay injeniera dia matihanina sy azo antoka tsara hanatanterahana DFM, injeniera, famokarana ary fitsapana.
Afaka mahazo ny prototype PCB sy PCBA haingana indrindra ianao afaka herinandro na andro. Amin'ny ankapobeny, ny fotoana fandefasana anay dia 3 herinandro, fa tsy volana. ny asanay dia hanampy anao hahazo ny prototypes fivorianao PCB ary avy eo hanao fitiliana haingana kokoa, izay midika fa afaka mivarotra haingana ireo vokatra elektronika ianao.
Afaka manome serivisy eto ambany izahay:
Amin'ny alàlan'ny fivorian'ny PCB lavaka
Prototype fitambarana PCB
Fivoriambe PCB Fihodinana haingana
Inona no antsika Prototype PCB Assembly fanompoana?
PCBFuture dia manam-pahaizana amin'ny serivisy fanangonana tariby vita pirinty. Miaraka amin'ny fanampian'ny teknikanay mpikirakira matihanina, injenieran'ny fikirakirana SMT ary ireo manam-pahaizana momba ny fizahana singa, afaka manome fivoriambe PCB mora vidy izahay, fivorian'ny fivoriambe mora vidy ary serivisy haingana isan-trano.
PCBFuture dia mahay mitantana ny fizotran'ny turnkey PCB, izay misy ny fidirana amin'ny singa rehetra (PCB sy ny faritra), ny fivorian'ny PCB, ny fifehezana ny kalitao, ny fizahana ary ny fandefasana azy. Raha mila teny notsongaina haingana ianao dia afaka mangataka teny nindramina 24 ora. Mandefasa mailaka amin'nysales@pcbfuture.com
Teo aloha: Mpanamboatra mpanamboatra fivoriambe vita pirinty vita pirinty any Sina - Mpanamboatra kaonty Circuit Asyria - KAISHENG
Manaraka: Fivorian'ny birao fanaraha-maso
Fivoriambe Pcb lehibe
Fiara fitetezam-paritra GPS Tracker Circuit GPS